डोमेन नाम खोजी | Martech Zone
कसरी एक डोमेन नाम खरीद गर्ने
सोमबार, मार्च 29, 2021 बिहीबार, अप्रिल 1, 2021 Douglas Karr
यदि तपाईं व्यक्तिगत ब्रान्डि,, तपाईंको व्यवसाय, तपाईंको उत्पादनहरू, वा तपाईंको सेवाहरूको लागि डोमेन नाम फेला पार्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने नेमचेपले एउटा खोज्नको लागि उत्तम खोजी प्रदान गर्दछ:
Domain ०.0.88 बाट सुरू गरीएको डोमेन खोज्नुहोस्
द्वारा संचालित Namecheap
एक डोमेन नाम छनौटमा सुझावहरू
यहाँ डोमेन नाम छनौट गर्ने बारेमा मेरो व्यक्तिगत विचारहरू छन्:
छोटो राम्रो - छोटो तपाईंको डोमेन, यो अधिक यादगार हो र टाइप गर्न सजिलो हुन्छ त्यसैले छोटो डोमेनको साथ जान प्रयास गर्नुहोस्। दुर्भाग्यवस, most क्यारेक्टर मुनि प्राय: डोमेनहरू पहिले नै सुरक्षित गरिएको छ। यदि तपाईं एकल, छोटो नाम फेला पार्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, म अक्षांश र शब्दहरूको संख्या न्यूनतममा फेरि राख्ने प्रयास गर्छु ... फेरि, सम्झना रहन प्रयास गर्नुहोस्। उदाहरणको रूपमा, Highbridge प्रत्येक शीर्ष-स्तर डोमेन भरि लगिएको थियो, तर हामी एक परामर्श फर्म थियौं त्यसैले म दुबै खरीद गर्न सक्षम भएँ Highbridgeपरामर्श र highbridgeपरामर्शदाताहरु ... लामो syllables को साथ डोमेन नाम, तर यादगार किनभने त्यहाँ केवल दुई शब्दहरु छन्।
बिभिन्न TLDs स्वीकार्य छन् - व्यवहार इन्टरनेट र प्रयोगकर्ता नाम को प्रयोग को लागी परिवर्तन गर्न जारी छ। जब मैले .zone शीर्ष-स्तर डोमेन (TLD) लाई छानें, केहि व्यक्तिले मलाई होशियार रहन सल्लाह दिए कि धेरै व्यक्तिहरूलाई TLD मा विश्वास हुँदैन र मँ कुनै प्रकारको दुर्भावनापूर्ण साइट हो भन्ने सोच्न सक्छ। मैले यसलाई चयन गरें किनकि म डोमेन को रूपमा मार्टेक चाहान्छु, तर अन्य सबै TLD लिइसकेका छन्। लामो समय मा, मलाई लाग्छ कि यो एक महान चाल हो र मेरो यातायात माथि छ त्यसैले यो जोखिम लायक थियो। केवल यो दिमागमा राख्नुहोस् कि जब कुनै व्यक्तिले TLD बिना डोमेन टाइप गर्दछ, त्यहाँ क्रमको क्रमको क्रम छ ... यदि मैले मार्टेक टाइप गरें र इन्टर हिट गरें भने .कमान पहिलो प्रयास हुनेछ।
हाइफनबाट बच्नुहोस् - हाईफनहरू बेवास्ता गर्नुहोस् जब डोमेन नाम खरीद गर्नुहुन्छ ... किनभने तिनीहरू नकारात्मक छैनन् तर होइन किनभने मानिसहरूले उनीहरूलाई बिर्सेका छन्। तिनीहरू बिना निरन्तर तपाईंको डोमेनमा टाइप गर्नेछन् र सम्भवतः गलत व्यक्तिहरूमा पुग्दछ।
कीवर्ड - त्यहाँ विभिन्न संयोजनहरू छन् जुन तपाईंको व्यावसायको लागि अर्थपूर्ण हुन सक्छ:
स्थान - यदि तपाईंको व्यावसाय जहिले पनि स्थानीय स्वामित्व र सञ्चालन हुनेछ, तपाईंको शहरको नामको नाम प्रयोग गरेर तपाईंको प्रतिद्वन्द्दीहरूबाट तपाईंको डोमेन भिन्न पार्न उत्तम तरिका हुन सक्छ।
ब्रान्ड - ब्रान्डहरू जहिले प्रयोग गर्न लाभदायक हुन्छन् किनकि ती प्रायः अद्वितीय हिज्जे हुन्छन् र सम्भाव्यता पहिल्यै लिइएको छैन।
सामयिक - ठोस ब्रान्डको साथ पनि, विषयहरू आफूलाई छुट्याउने अर्को उत्तम तरिका हो। भविष्यका परियोजना विचारहरूको लागि मसँग सामयिक डोमेन नामको एक थोडा स्वामित्व छ।
भाषा - यदि अ word्ग्रेजी शब्द लिइएको छ भने अन्य भाषाहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। तपाइँको डोमेन नाममा फ्रान्सेली वा स्पेनिश शब्द प्रयोग गर्नाले तपाइँको व्यवसायको समग्र ब्रान्डि someमा केही पिजाज थप्न सक्छ।
के हुन्छ यदि तपाईको डोमेन लिइएको छ?
डोमेन नामहरू खरीद र बेच्न एक आकर्षक व्यवसाय हो तर मलाई लाग्दैन कि यो एक लामो दीर्घकालीन लगानी हो। अधिक र अधिक TLDs उपलब्ध हुने बित्तिकै नयाँ TLD मा छोटो डोमेन खरीद गर्ने अवसर राम्रो र राम्रो हुँदै जान्छ। सबै इमानदारीता मा, म एक पटक गरे जस्तै म मेरो केहि डोमेन को कदर छैन र म आज कल डलर मा पैसा दिन को लागी उनीहरुलाई दिन चाहान्थे।
जहाँसम्म, यदि तपाईं एक व्यवसाय हो कि छोटो डोमेन किन्नुहोस् जुन पहिले नै लिएको छ मा बेचिन्छ मा, अधिक बिडिंग र बिक्री को लागी नै छन्। मेरो सल्लाह केवल धैर्य गर्न को लागी र तपाइँको प्रस्ताव संग धेरै पागल नहुनुहोस्। मैले ठूला व्यवसायहरूको लागि धेरै डोमेनहरूको खरीदको लागि कुराकानी गरें जुन पहिचान हुन नचाहेको हो र विक्रेताको लागि माग गरेको लागतको एक अंशको लागि तिनीहरूलाई मिल्यो। म सँधै जाँच गर्दछु कि सामाजिक च्यानलहरु उनीहरुका लागि आरक्षित गर्नका लागि उपलब्ध छ कि छैन। यदि तपाईं आफ्नो डोमेन मिलाउन आफ्नो ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, र अन्य सामाजिक उपनामहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, यो लगातार ब्रान्ड राख्न उत्तम तरिका हो!
प्रकटीकरण: यस विजेटको लागि मेरो सम्बद्ध आईडी प्रयोग गर्दछ Namecheap.
विज्ञापनले कसरी काम गर्छ? मानिसहरूले किन किन्छन्?
मार्केटिंग प्रवृत्ति: राजदूत र सिर्जनाकर्ता युगको उदय